AKHRISO: Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo la magacaabay, Yaase loo magacaabay Ajnabi-baa? – Puntlandtimes
AKHRISO: Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo la magacaabay, Yaase loo magacaabay Ajnabi-baa?
April 4, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay shaqsiga loo xulay in uu noqdo Gudoomiyaha Bangiga dhexe ee dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaana xulidiisa ay ka timi xubno kamid ah golaha wasiiradda ee dawladda.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xubnahan u xilsaaray soo xulida shaqsiga ku haboon jagada gudoomiyaha Bangiga dhexe oo ay ku tartamayeen dad kala duwan oo ay ku jiraan kuwa aan u dhalan Soomaaliya.
Guddoomiyaha cusub ee Bankiga Dhexe ayaa lagu magacaabaa C/raxmaan Maxamed C/llaahi, kaasoo magacaabidiisa ku yimid Guddi loo xil saaray xulidiisa oo ka tirsan Golaha Wasiirada.
Cabdiraxmaan wuxuu hadda yahay Lataliyaha Raysalwasaaraha ee xagga dhaqaalaha, waxaana muuqata in aan laga keenin meel fog, ee uu ka shaqeynayay Xaafiiska Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, waxaana uu ka soo jeeda gobalka Togdheer ee Somaliland.
Guddoomiyaha cusub ayaa waxaa uu leeyahay khibrad dhinaca maamulka Dhaqaalaha iyo Bankiyada.
Magacaabidan Muwaadinkan ee xilka Guddoomiyaha cusub ee Bankiga dhexe ayaa meesha ka saareysa hadal heyntii ku saabsaneyd in xilka Guddoomiyaha Bankiga Dhexe loo magacaabayo nin Ajnabi ah, kaddib markii Baarlamaanka ay horaantii sanadkan wax ka bedel ku sameeyeen wax ka bedelka Xeerka Baniga Dhexe.